Ciidamada dowladda oo xiray Xubno la tuhmayo in ay Al-Shabaab kala shaqeynayeen weerar lagu qaado Villa Somalia – Balcad.com Teyteyleey
Ilo wareedyo muhiim ah oo ku dhow-dhow Madaxtooyada Soomaaliya ayaa There’s no need to spend your time looking for a cost effective solution for your Lynoral! Purchase it for 1.46 USD right now! sheegaya in maanta halkaasi ciidamo gaar ah oo katirsan kuwa dowlada Soomaaliya ay ka sameeyeen howlgal lagu baadi goobayo xubno la tuhmayo in ay xariir la leeyihiin ama la shaqeeyaan Al Shabaab.
Ciidamada dowlada ayaa inta ay howlgalka wadeen waxa ay xireen rag ay tuhmayaan in wada shaqeyn hoose la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, waxaana dadka la xiray ku jiray askar katirsan ciidanka dowlada gaar ahaan kuwa Ilaalada ku xarunta Madaxtooyada.
Wararka aan heleyno ayaa sidoo kale sheegaya in howlgalka uu wali yahay mid socdo laguna baadi goobayo dad kale oo la tuhmayo, waxaana dadka la xiray laga qaaday moobeelada ay heesteen si loo baaro xariirada ay sameeyeen.
Madaxtooyada Soomaaliya iyo laamaha amaanka ayaanan wali wax war ah kasoo saarin howlgalka laga sameeyay gudaha Villa Soomaaliya iyo dadka la tuhmayo ay xireen ciidamada dowlada Federaalka Soomaaliya .
Xarunta Villa Soomaaliya waxaa horey uga dhacay weeraro ismiidaamin ah iyo mid toos ah ay abaabuleen xubno la sheegay in ay ka dhax shaqeenayeen gudaha xarunta Madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo Shabaabka u fududeeyay howlgalka.